Avy any Soeda hatrany Meksika, manazava ny antony mampanjavona ny teniny ry zareo indizeny · Global Voices teny Malagasy
Hoy ireo indizeny, mifamatotra amin'ny fahaverezan'ny tany ny fanjavonan'ny fiteniny
Nandika (en) i Daragh Brady
Voadika ny 15 Marsa 2020 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Română , Français, Português, Esperanto , русский, Ελληνικά, नेपाली, bahasa Indonesia, 日本語, عربي, Español
Teratany Skandinavy. Sary: Pixabay, nampiasàna ny lisansa CC.
Samy manana ny fombany manokana hijereny ny zavamisy ny fiteny tsirairay avy. Fiara iray ny fiteny, izay anovozan'ny vondrompiarahamonina iray ireo hevitra, fombandrazana, fomba amam-panao, tantara, ary ny fahatsapàna / fihetsehampo. Tena ilaina fatratra ny fikajiana azy ireny mba hitahirizana ny maripamantarana ireo mpiteny (mpampiasa) azy.
Kanefa, ankehitriny, manodidina ny 3.000 eo ho eo ireo fiteny manerana izao tontolo izao no tandindonim-panjavonana, araka ny lazain'ny UNESCO.
Ohatra, olona tokana monja sisa tavela amin'ny mpiteny ny Yagán, fitenin'ny foko iray ao Patagonia, any amin'ny farany atsimon'i Arzantina sy Shily. Ao Meksika, 64 raha kely indrindra ireo fiteny tandindonim-panjavonana, araka ny voalazan'ny Ivontoerana nasiônaly misahana ireo fiteny teratany (Inali). Ao Eorôpa, maherin'ny roapolo ireo fiteny no eo amoron-tevan'ny fahaverezana.
Tandindonin-doza ireo fiteny manerana izao tontolo izao, ary tsy afaka miala amin'izany i Eorôpa sy Amerika.
Fa maninona ny fiteny no maty?
Maty ireo fiteny satria tsy mifanaraka amin'ny firoboroboana ara-kolontsaina ny fepetra iainan'ireo vondrompiarahamonina teratany, araka ny lazain'ireo mpahay momba ny fiteny sady mpikatroka Yásnaya Elena Aguilar, avy ao Mexico, sy Sofia Jannok, avy ao Soeda.
Tao amin'ny lahateny iray nataony ho an'ny TEDx, Jannok, izay taranaka avy amin'ny foko teratany Sami, no manoritsoritra ireo fanafihana tsy mitsahatra mihatra amin'ireny vondrompiarahamonina ireny:
Toy izao no zavamisy ao anatin'ny vondrompiarahamonina misy ahy, ary any anatin'ireo vondrompiarahamonina teratany tsirairay avy manerana ny tany. Misy orinasa goavana vitsivitsy, tantanan'ireo olona tsy mijery afa-tsy tombontsoa ara-bola, tonga mibodo ny fonenanay ary manery anay hiala, na manao izay hanilihana anay tsotra izao fotsiny .
Marobe ireo vondrona indizeny manerana izao tontolo izao no manameloka ny fakàna ny tanin-dry zareo sy ny fanitsakitsahana ny zo maha-olona azy ireo. Ao Meksika, lohateny lehibe taminà gazety manerana izao tontolo izao ny famonoana an'ilay mpandàla tontolo iainana, Rarámuri Julián Carrillo, tamin'ny Oktobra 2018, izy izay niaro ireo ala tao Sierra Madre tsy hanaovana fitrandrahana tsy araka ny lalàna ary nanandratra ny feony nanohitra ny fanomezan'ny fanjakàna meksikàna faritra hitrandrahana harena ankibon'ny tany, ary ny tao Berta Cáceres tamin'ny Martsa 2016, nisy mpikambana iray avy amin'ny vondrompiarahamonina Lenca ao Honduras izay nanohitra ny fanorenana tohodrano famokarana herinaratra.
Mitohy misy hatrany ny tranga tahaka ireny, izay matetika no vitavita ho azy tsy vosazy: Ny 24 Febroary tamin'ity taona ity, nisy indizeny iray mpikatroka avy amin'ny vondrompiarahamonina Brörán, maty novonoin'ny andian'olona nirongo fiadiana. Efa nanakiana hatrany ny tsy fihetsehan'ny governemanta ireo mpikatroka.
Tao anaty fanambaràna iray nataon'ny Kaongresin'ireo Solombavambahoaka Mesikàna tamin'ny Martsa 2019, nilaza i Yásnaya Aguilar hoe:
Tsy maty akory ny vahoaka indizeny. Ny fanjakàna meksikàna no mamono azy.
Ny Aprily 2019, nosoritsoritan'i Aguilar tamin'ny fiteny Mixe ny kabariny ary nadika ho amin'ny fiteny Espaniôla ho an'ny Global Voices. Tao anatin'izany no nanehoany ny “fifamatorana akaiky misy amin'ny fanjavonan'ireo fiteny teratany sy ny fahaverezan'ny tany”.
Ankizivavy avy amin'ny vondrompiarahamonina Chatino ao Meksika. Sary: Pxfuel, nampiasàna ny lisansa CC.
Tsy misy hafa amin'izay, ny ONG Global Witness sy ireo mpikatroka toa an'i Eva M. Fjellheim, mpikambana iray avy amin'ny vondrompiarahamonina Sami ao Norvezy, milaza fa ny fandraharahana goavana amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany no tena asa goavana mifamatotra amin'ny famonoana ireo indizeny teratany mpiaro ny tontolo iainana. Amerika Latina no ahitàna betsaka indrindra amin'ireny fanafihana ireny. Araka ny voalazan‘i As Fjellheim tamin'ny gazetiboky Pikara :
Tao anatin'ny taona folo na dimy ambinifolo farany, nitombo be ny tsindry amin'ny taninay, ary nasiana tsindrimpeo kokoa ny amin'ny fitrandrahana ireo loharanon'angovo. Tonga saina izahay fa toa tsy manana zo mihitsy afaka hiaro anay na amin'ny fomba ahoana, na amin'ny fomba ahoana.
Misy ihany koa ireo mino fa ny fanavakavahana no singa iray tena mibahana toerana ao anatin'ilay olana, fanavakavahana zakain'ireo vondrompiarahamonina indizeny teratany. Raha niteny tao anatin'ny Foarabe Iraisampirenana ho an'ny Boky, natao tao Lima tamin'ny 2017, nilaza ilay Peroviàna mpanoratra sady mpiteny ny fiteny Quechua, Pablo Landeo, hoe:
Ny rafitra sôsialy no mibaiko ny toetoetra misy ireo fiteny teratany, ary ary eo no mitsofoka ilay fanavakavahana, ny fahatsapana henatra izay miraikitra manaraka ireny fiteny ireny satria toy ny zavatra lany andro sy tranainy be no fijery azy ireny.
Endrika hafa amin'ny fanavakavahana ny tsy fahampian'ny fanapariahana sy ny fampiroboroboana. Any amin'ireo firenena maro tahaka an'i Meksika, zara raha misy ny famatsiambolan'ny fanjakàna atao ho an'ireo tetikasa ara-kolontsain'ny indizeny amin'ny resaka literatiora na zavakanto. Ao Soeda, matetika no ampianarina ho toy ny teny faharoa ao amin'ny firenena ny fiteny anglisy, alemàna, finlandey, fa tsy ireo fiteny teratany.
Na eo aza ireo kilaometatra an'arivony manasaraka ireo firenena Tavaratra toa an'i Soeda, Norvezy, Finlandy, amin'i Meksika sy Pero, toa ifampizaran-dry zareo ireny ny toetra manavakavaka ny fiteny teratany sy ny famotehana ny maripamantarana ary ny fahatsiarovana tambabe ireo vahoaka izay mampiasa azy ireny.
Mpikambana avy amin'ny vondrompiarahamonina Sami ao Finland. Sary: Flickr/Youngbrov, nampiasàna ny lisansa CC.
Raha nanakaiky ny famaranana ny Taona Iraisampirenena ho an'ny Fiteny Teratany, tamin'ny 2019, nambaran'ny Firenena Mikambana ny hisian'ny Taompolo Iraisampirenena ho an'ireo Fiteny Teratany izay hanomboka amin'ny 2022 mba ho fampiroborobona sy fanomezana aina vao azy ireny.
#Androany, taorian'ny famaranana ny #IYIL2019, nolanian'ny #UNGA ny fehinkevitra momba ny zon'ireo #VahoakaTeratany, ?https://t.co/6cQ1S5vWah izay miaty ihany koa ny fanambaràna ny 2022-2032 ho Taompolo Iraisampirenena ho an'ireo Fiteny Teratany. Mitohy ny asa! #VahoakaTeratanyIsika pic.twitter.com/0sid5PAH3a
- UNPFII [@UN4Indigenous) 18 Desambra 2019